China G330 Kupisa Dip Gi Galvanized Steel Sheet fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Galvanized simbi pepa imhando yesimbi ine inopisa dip galvanized coating pamusoro payo, iyo inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka, midziyo yemumba, mota nemidziyo, kugadzira midziyo, nezvimwe.
2.Grade: G330, zvose maererano nechikumbiro chemutengi
4.Kukura: 0.16mm-2.5mm, zvose zviripo
7.zinc kupfeka: 30-275g / m2
8.Spangle: zero spangle, spangle diki, spangle yenguva dzose, spangle hombe
1. Mahwendefa esimbi anotonhora uye anopisa anobviswa mafuta nekugezwa kwealkali, anogezwa nemvura, oomeswa uye obva aiswa muchoto chakachinjika (chakatwasuka) chinopisa chinopisa nemachubhu anopenya, uye imwe chiyero chehydrogen chinopinzwa muchoto kuderedza moto. mhepo muchoto.
2. Mutsara wesimbi unopisa kune imwe tembiricha inonyudzwa muzinc fluid kuti inopisa galvanizing mune mamwe mamiriro.
3. Hukuru hwezinc ruva hunodzorwa nekuumbwa kwemvura zinc.Panguva imwecheteyo, nzira yekumanikidzika yekutonhora inogamuchirwa.Zinc ruva risati ratanga kupararira, maruva maduku e-zinc anokurumidza kutonhodzwa nemidziyo yemaruva maduku e-zinc kudzivirira mvura ye zinc kuti irege kuramba ichipararira uye inogadzira maruva maduku.
4. Mushure mokupisa kupisa galvanizing, mushure mokumirira post kutonhora, pedzisai pamusoro.Chekupedzisira, zvinoenderana nekushandisa, ita pamusoro passivation kurapwa zvakateerana kana zvakananga kuburitsa iyo color coil board.
Iyo yekumusoro oxidation kuramba yegalvanized simbi sheet yakasimba, iyo inogona kusimbisa iyo anti-corrosion kupinda kugona kwezvikamu.
1. Mari yekugadzira yakaderera.
2. Inogara kwenguva refu.
3. Kusimba kwekuputira kwakavimbika.
4. Kuvhara kune kusimba kwakasimba.
5. Chikamu chimwe nechimwe chezvikamu zvakaputirwa zvinogona kuputirwa ne zinc, iyo inogona kuchengetedzwa zvakakwana kunyange mukuora mwoyo, makona akapinza uye nzvimbo dzakavanzwa.
6. Nzira yekugadzira galvanizing inokurumidza kupfuura dzimwe nzira dzokuvaka nadzo, uye nguva inodiwa pakupenda panzvimbo yekuvaka mushure mekuisa inogona kudziviswa.
7. Kazhinji, mari yekupisa dip zinc yakaderera pane yekushandisa mamwe machira ekudzivirira.
8. Kuongorora kuri nyore uye kwakakodzera: iyo inopisa dip zinc layer inogona kuongororwa nemaziso uye neyakapfava nondestructive coating ukobvu tafura.
1.Buildings: matenga, madziro, magaraji, soundproof masvingo, pombi uye modular dzimba, nezvimwewo.
2.Automobile: muffler, exhaust pombi, wiper accessories, tangi yemafuta, bhokisi rerori, nezvimwe.
3.Household midziyo: firiji backboard, gasi chitofu, air conditioner, electronic microwave oven, LCD frame, CRT kuputika-proof belt, LED backlight, magetsi emagetsi, nezvimwewo.
4.Kushandiswa kwekurima: imba yenguruve, imba yehuku, granary, greenhouse pipe, nezvimwewo.
5.Others: chivharo chekudzivirira kupisa, kupisa kwekushisa, dryer, mvura inopisa, nezvimwewo.